November 28, 2020 - Padaethar
November 28, 2020 by Padaethar
သင့်ကိုတစ်ဘ၀စာလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုတာ မိန်းကလေးဆိုတဲ့ အမျိုးဟာကိုယ်သဘောမကျတဲ့သူမချစ်တဲ့သူဆိုတွဲကြည့်ဖို့နေနေသာသာ အနားတောင်အကပ်ခံကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်မိတဲ့သူဆိုရင်လည်း မျက်စိတစ်ဆုံးတစ်ဘ၀အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးချစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်အပေါ်ဒီမိန်းကလေးဟာ တစ်ဘေ၀လုံးစာအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘာအချက်လေးတွေကသိစေနိုင်သလဲ… (၁) သင့်ဘ၀ကိုအလင်းပြပေးတယ် သင့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့အတိတ်ကဆိုးသွမ်းခဲ့သမျှတွေ အမှားတွေကို သူမရောက်ရှိလာချိန်မှာငြိုငြင်ခြင်းမရှိပဲယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့သင့်ဘ၀အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ပါတယ်။ သူ့ဘ၀အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားလို့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပေါ် ဒီလိုအချိန်ကုန်ခံပြီးပြုပြင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ (၂) နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးချစ်တယ် တစ်ခါတစ်ရံသင့်ရဲ့လွဲမှားမှုတွေ ကြောင့်သူမကသင့်ကို စိတ်တိုချင်တို စိတ်ဆိုးချင်ဆိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လုံးဝတော့စိတ်မနာနိုင်ပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီးချစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သင်သူ့ပေါ်ချစ်နေသ၍သင်ရဲ့ကောင်း၏ဆိုး၏ မှန်သမျှကိုပြုပြင်ပေးပြီး နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတစ်ခါတစ်ရံမိခင်တစ်ယောက်လို တစ်ခါတစ်ရံ ကလေးတစ်ယောက်လို ချစ်နည်းမျိုးစုံနဲ့သင့်ကိုချစ်နေမှာပါ။ (၃) မင်းအတွက်သူ့ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားတယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ပိုးပန်းတဲ့ယောက်ျားဆိုတာ မရှားပါဘူး။ တစ်နေ့တစ်နေ့အလုပ်သွားကျောင်းသား နဲ့နေ့စဉ်ယောင်္ကျားလေးပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့တွေ့ဆုံနေရပင်မဲ့ သင့်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့သိက္ခာနဲ့တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးပါ။ သင်ကလွဲလို့တစ်ခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ (၄) ချစ်စိတ်တွေနိုးကြားတတ်တယ် သင့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးဟာ သင်ရဲ့အပြုမူတွေ အကြည့်တွေ မပြောဆိုတွေအောက်မှာသူ့ရဲ့ချစ်စိတ်တွေဟာနိုးကြားတတ်ပါတယ်။ယောက်ျားတကားကို ပလူးတူးတူးနေတတ်တာမဟုတ်ပဲ သင်တစ်ယောက်ပေါ်မှာပဲချစ်တတ်စိတ်တွေပေါက်ဖွားတတ်တာပါ။ (၅) သင့်မိသားစုအရေးပါစိတ်ဝင်စားတယ် တကယ်ဘ၀အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးချစ်တဲ့မိန်းကလေးဟာ သင့်မိသားစုရဲ့အခက်ခဲတွေကအရေးကြီးကိစ္စတွေက … Read more
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ
လပွညျ့ည ရောကျတိုငျး ရှတျဆိုရမညျ့ ငှပွေညျ့ ငှလြှေံ ခမျြးသာစမေယျ့ ငှဝေငျဂါထာ ငှဝေငျဂါထာဟု ကြျောကွားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတျော သဗ်ဗမင်ျဂလာဂါထာပါဠိတျော (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ်စော ၊ ရတ်တိမာ ဘာတိ စန်ဒိမာ။ သန်နဒ်ဓေါ ခတ်တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗွဟ်မဏော။ အထ သဗ်ဗ မဟောရတ်တိံဗုဒ်ဓေါ တပတိ တဇေသာ။ (၂) တာဒိသံ တဇေသမ်ပန်နံ ၊ ဗုဒ်ဓံ ဝန်ဒာမိ အာဒရံ။ နမက်ကာရာ နုဘာဝနေ ၊ သဗ်ဗေ ပူရေ န်တု သင်ျကပ်ပါ။ ဂါထာတျော မွနျမာပွနျ အနကျ (၁) နမေငျးသညျ နအေ့ခါ၌သာ တောကျပ၏။ လမငျးသညျ ညဉျ့အခါ၌သာ တောကျပ၏။ … Read more
ငွေဝင်ခါနီးပြီးဆိုရင် မက်လေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ် အိမ်မက်တွေ .
ငွေဝင်ခါနီးပြီးဆိုရင် မက်လေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ် အိမ်မက်တွေ . အိမ်မက် အမျိုး မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ချို့ အိမ်မက် တွေ က ရှေ့မှာ ဖြစ်လာ တော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ် ပြတဲ့ အိမ်မက် မျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို အရာ တွေကို မယုံကြည်တဲ့ လူမျိုးတွေ ရှိ ကောင်းရှိ နိုင် ပေမယ့် အပြင် မှာ တကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့၊ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာ ဓက တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လို အိမ်မက် မျိုး တွေ မက် လေ့ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ filipinotimes မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နို့ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည် အိမ်မက်ထဲမှာ နို့ တွေကို မက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို … Read more
နဖူးပြောင်သူတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အားသာချက်တွေ….
နဖူးပြောင်သူတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အားသာချက်တွေ…. နဖူးကျယ်တဲ့သူလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေက ပြောင်ကြီးလို့ ခေါ်ပြီး စနောက်တတ်ကြတာကြောင့် အများစုက ဆံမြိတ်လေးတွေနဲ့ နဖူးကျယ်ကျယ်တွေကို ဖုံးအုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နဖူးကျယ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဒီလိုထူးခြားချက်မျိုးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော်… (၁) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တယ် သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေကို မှီခိုတာထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ကြတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ် … ။ အခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြိတ်ဖြေရှင်းနေတတ်ပြီး တခြားလူတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့ ဝန်လေးတတ်တဲ့ သူတွေပါပဲ …။ (၂) လွယ်လွယ်နဲ့မပြိုလဲတတ်ဘူ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မရရအောင်လုပ်တတ်တယ်၊ ဘယ်လိုအတိုက်အခိုက်မျိုးတွေနဲ့ပဲကြုံရပါစေ လွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲမသွားဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ….။ (၃) ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာကိုမုန်းတယ် လွတ်လပ်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာမျိုးကို လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့ … Read more